Himalaya Dainik » पोखरामा एक महिला कोठामै ‘मृत’ फेला
पोखरामा एक महिला कोठामै ‘मृत’ फेला
46 seconds अगाडी
पोखरा – पोखरामा एक महिला कोठामा मृत फेला परेकी छन् । तनहुँको भिमाद घर भइ पोखरा ८ सृजना चोकमा कोठा भाडामा लिइ बस्दै आएकी शान्ति माया राना आइतबार राति साढे दश बजे ‘मृत’ अवस्थामा भेटिएकी हुन् ।
उनी केही दिनदेखि कोठा बाहिर ननिस्केका कारण झ्यालबाट भित्र चिहाउँदा चुक्कुल लगाइ कोठाभित्र ‘मृत अवस्थामा ‘शव’ देखिएको थियो । त्यही घरमा सँगै वस्नेले उनको अवस्थाका बारेमा प्रहरीलाई जानकारी गराएपछि प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेर आवश्यक अनुसन्धान गरेको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक विनोद सिलवालले जानकारी दिए ।
उनको उमेर अन्दाजी ६५/७० वर्षी भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यो पनि – बच्चालाई आमाबाबुसँगै सुताउने कि छुट्टै ?
बच्चालाई राति सुत्ने समयमा आमा बाबुसँगै सुताउने कि छुट्टै सुताउने ? गाउँघरमा बच्चालाई सँगै सुताउनुहुन्न भन्नेमा एउटा चर्चित उक्ति नै छ । विशेषगरी गाउँघरमा आमाबाबुको बीचमा बच्चालाई कहिलै पनि सुताउनुहुन्न भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर सहरी भेगमा यसबारेमा खासै चासो दिएको पाइँदैन ।
बच्चालाई आफूसँगै सुताउने कि नजिकै छुट्टै सुताउने भन्ने कुरा सामान्य सुने पनि जटिल समस्या हो । अझ काठमाडौं जस्ता सहरी भेगमा एउटा कोठामा गुजारा चलाउने परिवारको लागि यो निर्विवादित विषय हो कि एउटै खाटमा आमाबाबु र बच्चा सुत्ने गर्छन् ।
कहिलेकाहीँ यस्तो पनि सुन्नमा आउन सक्छ कि गहिरो निद्रामा हुँदा आमाको हात बच्चाको मुखमा या अन्य शरीरमा नै गएर पनि बच्चालाई समस्या भएका समाचारहरू आउने गर्छ । त्यो समस्याको चिन्ताबाट मुक्ति पाउन एवं आमाको पूरा निद्राको लागि बच्चालाई नजिकै राखे पनि एउटै खाटमा नसुतेकै राम्रो हुन्छ । दिनभर काम गरेर आएकी आमाको लागि निश्चिन्त भएर सुत्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसको लागि बच्चालाई आफू सुत्ने खाटभन्दा अलगै राख्नु राम्रो हुन्छ ।
फेरि बच्चालाई अलगै सुताउने भन्नुको अर्थ नवजात शिशुलाई पनि अलगै सुताउनु भन्ने चाहिँ होइन। नवजात शिशुलाई भने आमाको काख या आमाको साथमा नै सुताउनुपर्छ । प्रायः बच्चाहरु रातमा यताउता पुग्ने गर्छन् । एउटा कुनामा सुताएको बच्चा भोलिपल्ट अर्काे कुनामा पुग्ने गर्छ । त्यसैले बच्चाको लागि तयार पारेको ओछ्यान चारैतिर बारिएको खालको हुनुपर्छ । यद्यपि नवजात शिशुलाई भने एकातिर आमाले ढाकेर सुत्ने भएकोले त्यस्तो आवश्यक नपर्न सक्छ ।
बच्चालाई एक्लै सुताउने बानी बच्चैदेखि बनाउँदै लैजानु आमाको लागि मात्रै नभएर बच्चाको लागि समेत फाइदाजनक मानिन्छ । बच्चालाई सानैदेखि अलगै बनाउँदा उसले आफ्नो कोठालाई सुन्दर बनाउन आफ्नै किसिमले सोच्ने गर्छ । जस्तो, कुन ठाउँमा पढाइको टेबुल राख्ने कहाँ सुत्ने भन्ने व्यवस्थापन गर्न होस् या त कोठा सफा गर्न पनि सानै उमेरदेखि सिक्ने गर्छ । रातमा सुत्ने समयमा यदि आन्तरिक कोठा छ भने त्यस्तो कोठा कहिलै बन्द नगर्नुहोस् । भित्री कोठा छैन भने बाहिरी कोठा पनि सम्भव भएसम्म खुला राख्नुपर्छ ।
बच्चालाई अलग औछ्यानमा सुताउनु शा-रीरिक वा मा-नसिक हिसाबले समेत फाइदाजनक मानिन्छ । यस्तो शारी-रिक एव‌ मा-नसिक फाइदा आमाबाबुलाई पनि हुन सक्छ । यसले पतिपत्नीबीचको सम्बन्धमा समेत फाटो आउन सक्दैन । यी लगायत अन्य कारणले पनि बच्चालाई आमाबाबुभन्दा भिन्दै सुताउनु उपयुक्त हुन्छ ।
किसानको खेतमा गहुँ काट्दै विप्लव, भाइरल बन्यो तस्बिर
माधव नेपाल र भीम रावललाई निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय
चीनले खोप दिएपछि प्रधानमन्त्री मुस्कुराउँदै भनेः चीन र नेपालबीचको गहिरो सम्बन्ध छ
भोलिदेखि ४ दिन सबै शिक्षण संस्था बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
पोखराको आकास तुवाँलोले ढाकेपछि हवाई उडान अवरुद्ध !
बागलुङमा होली मनाउदा दुई समूहबीच ‘झडप’, दुईको मृत्यु, करिब १५ युवा ‘बेपत्ता’ (भिडियोसहित)
तस्बिरमा हेर्नुहोस् पूजा र आकाशको होली
खसीको मासु १ हजारभन्दा बढी मुल्यमा बेचे कडा कारवाही हुने
पठाओलाई टक्कर दिन आयो राइड सेयरिङ एप ‘साथी’
पठाओको लोगो अङ्कित ड्रेस लगाउन रोक
दुधे बालकलाई छोडेर अस्ताइन् कमला